Vaovao - Gala ho an'ny fifaninanana mozika ho an'ny tanora sy ny ankizy ao amin'ny distrikan'i Jinyun 33 taona
Ny harivan'ny 23 desambra, tantanan'ny birao fanabeazam-pirenenan'i Jinyun County, ny Komitin'ny Tanora Kaominista Jinyun County, ary ny Komitin'ny Asa Tanora an'ny Tanora Jinyun, ny Ivotoerana ho an'ny Tanora ho an'ny Tanora (Red Scarf College) ary ny Fikambanan'ny Mpihira County dia nampiantrano ny faha-33 " Golden Stick Cup "Hira Tanora Ny antoko loka ho an'ny fifaninanana dia tanterahina soa aman-tsara tao amin'ny Jinyun Beauty School. Tamin'ny fety, ireo mpiadina dimy voalohany isaky ny kilasy sy ny tetikasa tsirairay dia nanome loka teo an-toerana.
Amin'ny maha-sehatra lehibe hampiroboroboana ny fampandrosoana ny fahaizan'ny tanora sy ny zaza mahay zavakanto ao amin'ny distrika, ny Fifaninanana mozika ho an'ny tanora sy zaza ao amin'ny distrikan'i Jinyun dia natao nandritra ny fotoana 33 nifanesy. Miaraka amin'ny lohahevitra "Handova ny Mena Mena ary hiezaka ho tonga zazalahy tsara amin'ny vanim-potoana vaovao", ny fifaninanana tamin'ity taona ity dia namokatra mpandresy 1 490 isaky ny sokajy tamin'ny alalàn'ny preliminaries sy ny famaranana teo an-toerana. Ny isan'ny mpandray anjara sy ny refin'ny fifaninanana no ambony indrindra tamin'ny tantara.
Nanomboka ny antokony loka tamin'ny alàlan'ny ensemble instrumental "Beijing Tune". Taorian'izay dia nisy fampisehoana samihafa sy fampisehoana ambony kalitao niseho teny an-tsehatra. Pipa solo "Ambush on Ten Sides", Wu Opera joint dia mihira ny "West Lake Rescue Sister", "Lin Chong Qijie", chorale kely "Ajali Girl of the Great Liangshan", dihy solo "Silent Grassland", dihy iraisana "Dancing Youth" ary fandaharana hafa dia ny mpijery rehetra atolotra ho fanasana amin'ny maso.